Cadaasiska Badan Iyo Cawaaqibka Uu Ku Keeno ? - Xogside-news Xogside
BEERAHA | DEEQAANKA
AllPuntland newsSOMALI NEWSSOMALILAND NEWS
Bulshada Caalamka Ugu Cimriga Dheer
Mudanayaasha Golaha Guurtida ee Somaliland ayaa maanta dood ka yeeshay xaaladda…
Wasiir ku xigeenka W. Warfaafinta oo furay kulan lagu dhammaystirayo qorshaha…
Odayaasha Iyo Waxgaradka Degmada Ceegaag Ee Gobolka Saraar Oo Ka Hadlay…
AllBEERAHA | DEEQAANKACAAFIMAADKACIYAARAHAMUXADAROOYIN
Dunida Oo Ku Kala Duwan Tilmaamaha Quruxda
Dalalka iyo Shirqoolada Madaxda Ee Sirdoonku Fuliyay
Iska Jir Cabidda biyaha , Wakhtiyada Qaarkood
Muuqaalka Iyo Maqalka Onkodka Iyo Hilaaca
Dadka Japan Waa Dad Cimri Dheer ?
Koroshof : Waan Baqday sidan Aad Adiguba Imika U Baqatay
Maraykanka: Sexeexii Baad Shimbireedka
Tartanka Naxdinta Badan
Su’aalihii ugu badnaa ee Google laga Baadhay 2021-kii
Which MacBook Pro is right for you?
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Cadaasiska Badan iyo Cawaaqibka Uu Ku Keeno ?
Cadaasiska Badan iyo Cawaaqibka Uu Ku Keeno ?
Dalka Japan dagaalkii labaad sanadkii 1945, markii la jebiyay ee Maraykanku uu hubka culus la dhacay, haddana taasi kama dhigin dhamaadkiisa. Waxa uu bilaabay inu dadaalo ilaa uu dib ugu soo noqday dariiqa nolosha ee laga saaray.
Arrintaasi waxa keenay dadaalka iyo aqoonta ay kasbadeen, oo ka dhigtay kuwo ka faa’idaysta wakhtiga iyo awoodda dadkooda. Laakiin mushkuladu waxa weeyi in Japan ay tahay dalalka ugu hormarsan haddana dadkeedu ugu niyadjabsan yihiin, oo aanay ku qancayn nolosha xaqiiqda ee taalla.
Nin lagu magacaabo Naoki Miyamoto, oo ka soo jeeda qoys dabaqada dhexe ah, kana shaqaynayay shirkadda nadaafadda ee dalka Japan, ayaa bishii August sanadkii 2002 , gurigiisa ka baxay si uu shaqada shirkadda u tago. Waxase yaab noqotay in Mr. Naoki aanay qoyskiisu mar danbe indho saarin , gurigana aanu ku soo noqon.
Qoyskiisu waxa ay isku dayeen in ay helaan raq iy ruux halka uu ku danbeeyay laakiin kama tegin wax muujinaya Meesha uu ku danbeeyay iyo talaabada uu qaaday midkoodna.
Mr.Tayoshi oo ah wiilka ay walaalaha yihiin ee ka weyn ayaa isku deyey in uu ogaado in dhibaato uu guriga kala kulmay iyo inuu jiro qof si xun ula dhaqmay Naoki , laakiin arinkaasi waxa uu ogaaday inu aanay jirin. Waxa uu isku qomameeyay in aanu xidhiidh la lahayn oo haddii uu jiri lahaa uu wax badan ka ogaan lahaa walaalkiisa 24 jirka ah, xaaladiisa iyo waxa sababay waayidiisa. Hooyadii iyo aabbihii ayay murugo badan ku haysaywaayidiisu , iyo su’aal maalin walba taagan oo laga weydiinayo masiirka walaalkii iyo halka uu ka danbeey
Mar kasta oo waalidku weynaado, waxa ay ka baqayeen in qaddarku aanu mar danbe isu keenayn iyaga iyo wiilkooda, madaama u xanuunada maskaxda ahna wakhtiyada qaar qabeen, laakiin haddana arinkaasi iyaga keli kuma ahayn ee qoysas badan oo Reer Japan ayaa sidaa caruurtooda uga quustay. Tayoshi wiilka ka weyni waxa uu mar kasta sawiranayay oo rajaynayay in uu helo fariin uga timi walaalkii Naoki.
In kasta oo ay dawladda Japan u aragto in qofkii maqnaa toddoba sano uu yahay mid si rasmi ah u dhintay, haddana Naoki hooyadii waa ay diiday in ay rumaysto waxaana ay bil walba kaydinaysay lacag ay ugu talo gashay isaga, laakiin taasi waa mid ka mid riyada ay qabto iyo in aanay rumaysan Karin wiilka ka baxay isagoo caafimaad qaba in aan la hayn meel uu jaan iyo cidhib dhigay.
Toddobaatameeyadii qarnigii la soo dhaafay, erayga (Johatsu) ama uumi-baxayaasha ayaa caan ka noqday dalka Japan, waxaana lagu tilmaansan jiray dadka go’aansaday inay uumi-baxaan, nolol cusubna ka bilaabaan meelo kale oo ka tirsan Japan lafteeda. Tan iyo wakhtigaasi tirada uumi -bixiyaasha ayaa kordhay ilaa maanta ay gaadhay tobanaan kun.
Sannadkii 2017 -kii oo keliya, Booliiska Japan waxa ay sheegeen in tirada uumi -baxayaashu ay gaadheen 85,000, in kasta oo badankood dib loo helay, laakiin khubaradu waxa ay xaqiijinayaan in tiradu intaas aad uga badan tahay
Dhab ahaan, sababaha ku khasba qofka inuu qaato go’aankan halista ah weli si fiican looma garanayo, laakiin khubaradu waxa ay isku dayayaan inay wax ka bartaan oo fahmaan dhacdo jahawareer iyo baaxad weyn leh (uumi -baxa), iyagoo u daliishanaya dhowr sababood, oo ay ugu muhiimsan tahay habka nolosha Japan oo adag tobannaankii sano ee la soo dhaafay.
Waxaa jira eray Japaniis ah oo loogu dhowaaqo (sekenti), waxaana uu tilmaamaya ilbaxnimo qaab-dhismeedkeedu qalafsan yahay, dad badanna aanay awoodaan inay la jaanqaadaan oo ay la qabsadaan noloshaas ku saleysan muuqaalada, sidaa darteedna dareenka cadaadisku waa midka ugu badan sababaha ugu muhiimsan uumi-baxa deegaan ee aan naxariista lahayn.
Dabeecadda bulshada Japan ayaa cadaadis saarta qofka caadiga ah. Waxa looga baahan yahay inuu ku guulaysto shaqada, waxbarashada, guurka iyo arrimaha qoyska. Guuldarada ama isdhiibiddu waa arrin aad u xun oo ceeb ah dadka reer Japan. Arrimahaasi ayaa keena in qofku deegaankiisa ka uumi baxo oo dego deegaan kale oo aan laga aqoon, taasi oo u sahlaysa inuu ugu yaraan ka qarsoomo ceebta fashilka. Waxaa laga yaabaa in qisada uumi-baxa ninka lagu magacaabo Suji Muto ay daliil cad u tahay arrintaas.
Suji waxa uu ka soo jeeda qoys maalqabeen ah oo ganacsi balladhan leh, laakiin yaraantiisii ​​waxa uu dareemay in cadaadis iyo sida wax kasta looga rabo inuu buuxiyo 100%, madaama uu yahay wiil caan ah oo Qoyskiisu maalqabeen yihiin. Suji wuxuu dareemay inuu ku cabudhmay agagaarka qoyskooda, sidaas darteed waxa uu go’aansaday inuu baxsado, isagoo xaaskiisa furay iyadoo markaa saddex carruur ah u haysay.
Suji waxa uu ka bilaabay deegaanka cusub nolol aad uga hoosaysa noloshiisii ​​hore, Suji waxba kama gelin in noloshiisa hadda ay ka wanaagsan tahay iyo in kale tiisa hore, laakiin waxa uu arkay in cadaadiska oo uu ku sii jiro ay ku qasbi doonto inuu nolosha xaaskiisa u rogo cadaab, madaama xidhiidhkooduna uu xumaa.
Laba sano oo uumi-baxa baxsadaka ku jiray ka dib, Souji waxa uu tegay saldhigga booliiska si uu u cusboonaysiiyo liisankiisa. Markii ay arkeen waa ay garteen waxaana ay u sheegeen in isaga qoyskiisu raadinayaan oo aanay garanayn inuu nool yahay inuu dhintay .
Soji waxa uu go’aansaday inuu carruurtiisa kula kulmo goob nasasho oo bulshada ka dhaxaysa, laakiin go’aanka dib ugu noqoshada guriga dib baa loo dhigay ilaa iyo inta uu si fiican uu dareemayo inuu ka adkaaday dareenkii cadaadiska ahaa ee ku khasbay inuu baxsado isagoon qofna u sheegin deegaan kale ku uumi baxo. Caruurta iyo ubadka yaan lagu cadaadin oo lagu khasbin wax iyaga ka awood badan. Dadku isk caqli maaha, isku karti maaha, iskuna fikir maaha.
….. Source (kabbos.com)
Previous articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Xilka qaadis, bedel iyo Magacaabid ku sameeyey qaar ka mida masuuliyiinta xukuumadda.
Next articleGuddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Mr Jonathan Doernhofer oo ah madaxa hay’adda IRI (International Republican Institue).
Faaiidooyinka Jimcisiga Iyo Xanuunada
Beenta Iyo Fikradaha Khaldan
war celin Cancel reply
Guusha Waxa Lagu Gaadhaa Dadaal
Dadaalka Agoomaha Iyo Doorka Hooyada
President of the Republic of Djibouti meeting with the Somaliland delegation...
Xogside - January 27, 2022 0